प्रधानमन्त्री ज्यू डा. केसीलाई चिन्नुस्, सत्यको पक्षमा लड्न फगत एक जना भए पनि पुग्छ।
काठमाडौँ । सोमबार संसद्मा बोल्दै नेपाली काँग्रेसका नेता गगन थापाले अनसनरत डा. गोविन्द केसीलाई चन्न प्रधान्मन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग आग्रह गरेका छन्। उक्त अवसरमा उनले जुम्लामा अनसनरत डा केसीको स्वास्थ्य अवस्था चिन्ताजनक रहेमा चिन्ता व्यक्त गर्दै सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराए।
कांग्रेस नेता थापाले भने – ‘म विनम्रताका साथ प्रधानमन्त्रीलाई भन्न चाहन्छु, डा केसीलाई चिन्नुस्। न उहाँसँग कुनै झण्डा छ, न लोभ छ, न त कुनै स्वार्थ। मात्र उहाँसँग नशा छ, चिकित्सा क्षेत्र सुधार गर्ने नशा, र त्यो नशा कसैले नजरअन्दाज गर्दैमा उत्रिनेवाल छैन। कसैले तर्साएर उत्राने प्रयत्न नगर्दा हुन्छ। उहाँका माग सहि छन् त्यसैले सम्बोधन गरौँ। नेपाली कांग्रेस सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार छ।’
राजतन्त्रमा आन्दोलनरत शक्तिको संख्या गनेर नजरअन्दाज गर्दा ज्ञानेन्द्रले आफ्नो सत्ता गुमाउनु परेको भन्दै उनले यदि प्रधानमन्त्री ओलीले पनि दुई तिहाइको दम्भमा विपक्षी र आन्दोलनरत पक्षको संख्या गर्ने गन्ने काम गरे यसको नतिजा राम्रो नहुने उनको भनाई छ ।
उनले भने – “सत्यको पक्षमा लड्न फगत एक जना भए पनि पुग्छ। आज डा गोविन्द केसी सत्यको पक्षमा उभिनुभएको छ। त्यो उभिँदै गर्दा मान्छे कति छन्, नहेर्नुस् प्रधानमन्त्रीज्यु। टाउको कति छन् नहेर्नुस्। सदनको टाउको पनि नगन्नुस्’
चिकित्सा शिक्षा विधेयकमा प्रधानमन्त्री र स्वास्थ्य मन्त्रीले एउटा-दुइटा व्यक्तिको स्वार्थको कुरालाई छाडेर मात्रै हेर्ने हो भने सँगै उभिएर पारित गर्न सकिने स्थिति रहेको थापाको भनाई थोयो ।
प्रकाशित : सोमबार, असार २५, २०७५१७:३८
“अरु चाँही साउनको सिस्नु जस्तो फस्टाउने अनि हामी चाँही ओइलाउने हुन्छ ?” – प्रधानमन्त्री ओली
जित्नेले अहंकार र हार्नेले काम गर्नै नदिने काम नगरौँ – नेपाल
ओलीको ट्वीटबारे कडा प्रतिक्रिया दिंदै प्रचण्डले भने, ‘के के कुरा मैले पनि सुनेँ, चिज गम्भीर छ’…